Muxuu salka ku hayaa Safarka Prof Cali Khaliif Galayr uu Muqdisho ku yimid - Awdinle Online
Muxuu salka ku hayaa Safarka Prof Cali Khaliif Galayr uu Muqdisho ku yimid
October 17, 2019 (AO) – Prof Dr. Cali Khaliif Galyr oo ah hogaamiyaha maamulka Khaatuma State ee ku biiray Somaliland islamarkaana ka dhisnaa Gobalada Sool, Sanaag iyo Ceyn ayaa soo gaaray magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaana soo baxaya warar kala duwan oo ku saabsan socdaalkiisa.
Warbaahinta Awdinle Online ayaa ogaatay sababta rasmiga ah ee ka dambeysa socdaalka Cali Khaliif Galyr oo maalmo ku sugan caasiamda Soomaaliya ee Muqdisho ka dib socdaal uu uga yimid dalka Itoobiya.
Madaxweynihii Khaatuma State Mr Cali Khaliif Galyr ayaa magaalada Muqdisho u yimid sababo caafimaad ka dib xanuun uu dareemay, ayada oo ay qoyskiisa kula taliyeen in uu aado Muqdisho si loo daaweeyo.
Ehalada Prof Galayr ayaa Awdinle Online u sheegay in madaxweynaha uu ku jiro Isbitaal ku yaalo magaalada Muqdisho isla markaana laga daaweynayo kiliyaha, sidoo kalane lagu sameynayo baaritaano caafimaad.
Maalmihii la soo dhaafay ayaa magaalada Muqdisho waxaa ka taagnaa warar sheegaya in Prof Cali Khaliif Galayr uu u yimid Muqdisho marti qaad uu ka helay Madaxda dowladda Soomaaliya, islamarkaana loo adeegsan doono kicin dadweyne oo ka bilaawda gobaladii Khaatuma State ee ku biiray Somaliland kadib markii ay la heshiiyeen hogaaankii Madaxweyne Siilaanyo, balse taas ma muuqato.
Previous articleMaxaa looga hadlay kulanka Golaha Wasiirada DKG :- (SAWIRO)
Next articleWasaaradda Waxbarashada oo amar Dul dhigtay Iskuulada iyo Jaamacadaha Dalka